शिक्षामा फिस्टेलको फड्को : पोखरामै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शिक्षा | eAdarsha.com
पोखरा । मनै रमाउने खुला ठाउँ । सुविधासम्पन्न भवन । भवनमात्र होइन अत्याधुनिक स्विमिङ पुलसहित पर्याप्त खेल मैदान । परैबाट हेर्दा ५ तारे होटेल झैं लाग्ने । यो दृश्य हो पोखराको फिस्टेल एकेडेमीको ।
गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा झन्डै ३ दशकदेखि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएको फिस्टेल एकेडेमीले पोखरा १७ बिरौटामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको भौतिक सुविधासहित युग सुहाउँदो प्रगतिशील शिक्षामा फड्को मारेको छ । त्यसो त गुणस्तरीय शिक्षासँगै अतिरिक्त क्रियाकलापमा नाम दर्ज गरिसकेको छ फिस्टेल एकेडेमीले । फिस्टेलका संस्थापक निर्देशक चिनु रानाभाटलाई यतिले चित्त बुझेन ।
विद्यालयस्तरकै गुणस्तरीय शिक्षाका लागि थुप्रै बालबालिका काठमाडौं र भारतका विभिन्न सहरमा जाने गरेको उनले देख्दै आएका हुन् । मनमा प्रश्न उठ्थ्यो, यी विद्यार्थीलाई पोखरामा रोक्न सकिँदैन र ? अनि अन्य सहरका बालबालिकालाई पोखरा तान्न सकिँदैन र ? भन्छन्, ‘विकसित मुलुकहरुका विद्यालय हेर्ने मौका पाएँ, त्यहाँका विद्यालयका तुलनामा हामीले केही गरेकै रहेनछौं, मलाई तिनै स्कुलको अनुशरण गर्न मन लाग्यो ।’ १५ वर्ष अगाडि नै किनेको जग्गा थियो । त्यही जग्गामा अहिले १ अर्ब लगानी गरेर भौतिक र अन्य संरचना निर्माण भइरहेको छ ।
माछापुच्छ्रेजस्तै उचाइ बनाएको फिस्टेललाई अझै उँचो बनाउने सोच उनमा पलायो । उनको सोच र सपना अहिले साकार भएको छ । नयाँ शैक्षिक सत्रसँगै अब उनले नयाँ अवधारणासहित सञ्चालन गर्दै छन्, उही फिस्टेल एकेडेमीलाई ? उनले भने, ‘२१ औं शताब्दीको यो परिवेशमा स्तरीय शिक्षाका लागि अब पोखरा छाड्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्दै अभिभावकको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने विश्वास म दिलाउँछु ।’ साहसिक खेल र यहाँको मनोरम प्राकृतिक छटाकै कारण पोखराले देशी, विदेशी पर्यटकको मन तानेको छ । त्यसैले त विश्वकै पर्यटकीय गन्तव्य सावित भएको छ । साहसिक पर्यटनमा पनि उत्तिकै अब्बल छ पोखरा ।
स्वास्थ्य शिक्षामा पनि उसैगरी नाम कमाएको छ । मनिपाल मेडिकल कलेज र गण्डकी मेडिकल कलेजमा विदेशबाट समेत चिकित्सा विज्ञान अध्ययन गर्न आउँछन् । एउटा अभाव थियो अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विद्यालय । अब त्यो अभाव पनि पूरा गरेको छ फिस्टेल एकेडेमीले ।
सरकारी तबरबाट निर्धारित कोर्स त पढाइ हुन्छ नै । तर विद्यार्थीका लागि त्योमात्र पर्याप्त हुँदैन । उनीहरुलाई जीवनोयोगी ज्ञान चाहिन्छ । अनि कतिपय विद्यार्थीमा रहेको अन्तर्निहीत प्रतिभा प्रस्फुटनका लागि उसले अवसर खोजिरहेको छ । यसका लागि कुनै पनि कसरी राखिँदैन भन्छन् संस्थापक निर्देशक रानाभाट । उनले भने, ‘आजको कम्प्युटर युगमा प्राविधिक शैलीमा विद्यालयको लक्ष्यलाई दरिलो साथै औचित्यपूर्ण सावित गर्न हामी सदैव प्रयासरत रहन्छौं ।
बिरौटाको १८ रोपनी जग्गामा शैक्षिक तथा प्रशासकीय भवन निर्माण भइसकेको छ । जसको अन्तिम सजावटमात्र बाँकी छ । त्यसका अतिरिक्त २२ रोपनी जग्गामा खेल मैदान निर्माण गरिएको छ । जुन खेल मैदानमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका प्रतियोगितासमेत सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
वातानुकूलित र फराकिला कोठा छन् । जसमा विद्यार्थीहरु ठेलमठेल गरेर बस्नुपर्ने छैन । विदेशको मापदण्ड अनुसार एउटा कक्षाकोठामा ३० जनामात्र विद्यार्थी रहनेछन् । सबै कक्षाकोठा स्मार्ट र डिजिटल प्रविधियुक्त छन् । विद्यार्थीले कोर्स र अतिरिक्त ज्ञानका लागि प्रयोग गर्न आधुनिक शैलीको पुस्तकालय निर्माण गरिएको छ । जसमा इ लाइब्रेरी अलग्गै छ । अतिरिक्त क्रियाकलाप र सेमिनारका लागि तलैपिच्छे सुविधासम्पन्न हलसमेत बनाइएको रानाभाटले बताए । विज्ञान कम्प्युटर र अन्य विषयगत सिकाइका लागि सुविधा सम्पन प्रयोगशाला निर्माण भइरहेका छन् । यसका लागि कोठाहरु तयार भइसकेका छन् भने सामग्री बाहिरबाट आउने क्रममा छ । सिनियर र जुनियर लेभलका विद्यार्थीलाई छुट्टाछुट्टै कम्प्युटर ल्याब बनाइएको छ ।
गुणस्तरीय शिक्षाका लागि गुणस्तरीय खानपान चाहिन्छ । यसैका लागि फिस्टेलले ओपन किचनसहित ४ सयभन्दा बढी विद्यार्थी अट्ने भोजनालय बनाएको छ ।
फिस्टेल एकेडेमी नेपालमा खेलाडी उत्पादन गर्ने विद्यालयमा अगाडिको लाइनमा पर्छ । भलिबलका थुप्रै राष्ट्रिय खेलाडी फिस्टेलका उत्पादन हुन् । अहिले नयाँ शैलीको संरचनामा फिस्टेलले खेलकुदका लागि मनग्गे लगानी गरेको छ । मिनी ओलम्पिक आकारको स्विमिङ पुल साथै बालबालिकाका लागि पनि अलग्गै स्विमिङ पुल बनाइएको छ । जसमा तातोपानी समेत रहनेछ । ठूला भवन र कोठा मात्र होइन स्वच्छ वातावरणका लागि खुला ठाउँ पनि चाहिन्छ । यसका लागि पर्याप्त ठाउँ छाडिएको र प्रत्येक कक्षा कोठाको बाहिर आवागनमा लागि उस्तै गरी धेरै ठाउँ राखिएको छ । रानाभाटले भने, ‘वातावरणीय प्रदूषणबाट मुक्त नितान्त कोलाहलरहित वातावरणमा हामीले शिक्षा प्रदान गर्नेछौं ।’
त्यतिमात्र कहाँ हो र ? हरेक तला र कोठाहरुमा पुग्नका लागि अपांगतामैत्री ¥याम्पका साथै लिफ्ट र त्यही अनुसारका खुला भर्‍याङका कारण विद्यार्थीलाई आउजाउ गर्न सहज हुने विद्यालय प्रशासनको विश्वास छ । स्वास्थ्य सतर्कताका लागि अलग्गै कक्ष र अनुभवी स्वासथ्यकर्मी पनि रहनेछन् । आधुनिक शैलीमा बनाइएको भूकम्प प्रतिरोधात्मक विद्यालय भवनमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङको समेत व्यवस्था छ । हाल १२ कक्षासम्मको पढाइ हुने फिस्टेलमा आगामी दिनमा उच्च शिक्षाका कक्षासमेत सञ्चालन गरिने संस्थापक निर्देशक चिनु रानाभाट बताउँछन् । फिस्टेलमा यसै वर्षबाट साइन्समा ११/१२ को कक्षासमेत सञ्चालन हुँदै छ ।
दमौली । एक सय ४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाले दसैंमा पनि कामलाई निरन्तरता दिएको छ । आयोजनाको तीन वटै…
चाडपर्वलाई समयानुकुल बनाउन मुख्यमन्त्री पाेखरेलको आग्रह
COVDI-19: 272 new cases, 777 recoveries, 8 deaths